Antigène sy Antibodies - BALLYA
Inona no dikan'ny hoe antibody ao anaty ra?
Fikarohana haingana Inona no atao hoe antibody? Inona no dikan'ny hoe antibody ao anaty ra? Inona no dikan'ny hoe manana antikôniôma be loatra amin'ny ranao ianao? Antibodies amin'ny karazan-dra Antibodies ao anaty ra mandritra ny fitondrana vohoka Famaranana Inona ny atao hoe antibody? Ny antibiotika ao anaty ra na tsiranoka interstitial dia manondro ny immunoglobulin novokarin'ny plasma […]
Antody mahery vaika vs anti-olombelona
Fikarohana haingana Inona no atao hoe anti-olona? Fanasokajiana ireo vatan'olombelona namboarina 1. Antiozika chimerika an'olombelona-totozy 2. Antikôdiôma novaina 3. Antiozika miverimberina 4. Herin'olombelona 5. Antody mahery vaika vs anti-olona Ny fivoaran'ny maha-olombelona ny antibody 1. Antibody Humanization 2. Toro lalana 3. Antibody totozy VS Humanody 4 Famaranana fampiharana Inona ny atao hoe antibody mahaolona? Manohitra ny ankamaroan'ny olona […]
Ny fifandraisana misy eo amin'ny immunoglobulin sy ny aretina
Fikarohana haingana Inona no atao hoe immunoglobulin? Structure Immunoglobulin Immunoglobulin sy aretina 1. Immunoglobulin sy diabeta 2. Immunoglobulin sy homamiadana 3. Immunoglobulin sy aretina rheumatic Avy aiza ny immunoglobulin? 1. Lova avy amin'ny reny 2. Fampidirana ny taova fiarovan'ny vatana 3. Fanampiana in vitro Fampahafantarana ny fitsapana immunoglobulin 1. IgG 2. IgA 3. IgM 4. IgE […]
Inona ny fitsapana immuno-histochemistry?
Fikarohana haingana Inona no atao hoe immunohistochemistry? 1. Famaritana 2. Antony 3. Toetra mampiavaka 4. Fanasokajiana 5. Fampiasana inona no ilana ny immunohistochemistry? Protocol Immunohistochemitry 1. Fomba Immunofluorescence 2. Fomba fametahana marika Immunoenzyme 3. Teknolojia volamena koloaly famonoana famaranana Inona no atao hoe immunohistochemistry? 1. Famaritana Immunohistochemistry (ihc), fantatra ihany koa amin'ny hoe immunocytochemistry, dia manondro teknolojia vaovao ananan'ny qualitative, localized, […]
Septambra 25, 2020
Inona no fiasan'ny immunoglobulin?
Fikarohana haingana Inona no atao hoe immunoglobulin? 1. Famaritana 2. Struktur Immunoglobulin 3. Karazana immunoglobulin immunoglobulin vs Antibody 1. Inona no atao hoe antibodies? 2. Antibody Structure 3. Ny tsy fitovizan'ny antibodies sy immunoglobulins Ny fiasan'ny immunoglobulin 1. IgM 2. IgG 3. IgA 4. IgE 5. IgD Famaranana Inona ny immunoglobulin? 1. Famaritana Globulin dia […]
Inona no maha samy hafa ny antibodies monoclonal sy polyclonal?
Fikarohana haingana Inona avy ireo antibodiônôma monoklonal? 1. Famaritana 2. Tantara 3. Famokarana Antibody Monoklonal 4. Fomba fikajiana 5. Fampiharana Inona no atao hoe antibody polyclonal? 1. Inona no dikan'ny antibody polyclonal? 2. Structure 3. Classification 4. Application Monoclonal vs Polyclonal antibodies 1. Concept 2. Production 3. Cons and Pros 4. Ny tsy fitoviana hafa Famaranana Inona avy ireo antibodies monoclonal? […]
Inona no ilan'ny FC amin'ny antibody?
Inona no atao hoe antibody? Inona no atao hoe FC? Famaritana1. Fc Domain2. Fampidirana fohifohy Inona no dikan'ny mpandray Fc? Inona no ilazan'ny FC amin'ny antody? Fehiny Ny sombin-kazo azo refesina (Fc antibody) dia ny rambon'ny antody, izay mifanerasera amin'ireo mpitsabo sela izay antsoina hoe mpandray Fc ary proteinina sasany amin'ny rafitra famenony. Io fampiasa io dia ahafahan'ny antibodies […]
Inona no maha samy hafa ny serum sy ny plasma?
Ny fitsapana ny ra dia fitsapana haingana be ho an'ny detection COVID-19. Ireo santionany samihafa dia hanana valiny farany lehibe samy hafa rehefa manao fitsapana antibody covid-19. Ny fitiliana haingana rehetra dia mila mitily mifototra amin'ny ra, plasma na serum iray manontolo. Noho izany, inona no mahasamihafa ny serum sy ny plasma? Serum VS Plasma toy ny etsy ambany. Inona ny ra ao […]